အမေးအဖြေများ - Ningbo Nide စက်မှု Co. , Ltd မှ
ကျနော်တို့ armature အကွေ့အကောက်များသောစက် quotation အဘို့လိုအပ်တယ် 1.What
သင့်လျော်စက်မော်ဒယ်အကြံပြုနှင့်အညီကိုးကားပေးနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ armature ပုံဆွဲခြင်းနှင့်ဝါယာကြိုးအချင်းနဲ့နံပါတ်လှည့်ကို၎င်း, ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များအတွက်လိုအပ်ချက်အပါအဝင်အကွေ့အကောက်များသောပုံလိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်စက်ကိုကိုးကားအကွေ့အကောက်များသော stator ဘို့လိုအပ်တယ် 2.What
ကျနော်တို့ဝါယာကြိုးအချင်းနှင့်အလှည့်အရေအတွက်ကိုအပါအဝင်ပုံအကွေ့အကောက်များသော, stator ပုံဆွဲလိုအပ်ပါတယ်။ စက်အရေအတွက်ထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့ကကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုသိသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အသွားအပြန် quotation အဘို့လိုအပ်တယ် 3.What
ကျနော်တို့အသေးစိတ်အရွယ်အစားနှင့်ပစ္စည်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ရာအသွားအပြန်ဆွဲလိုအပ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးလျှင်, ငါတို့သည်လျှောက်လွှာအရသိရသည်သင့်လျော်သောပစ္စည်းအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့အမိန့်နှုန်းလိုအပ်သောအရေအတွက်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
4. ကျွန်တော်စက်ကိုကိုးကားဟန်ချက်ညီ armature ဘို့လိုအပ်ကဘာလဲ
ကျနော်တို့စက်ဟန်ချက်ညီနှစ်မျိုးရှိသည်: သင့်လျော်စက်မော်ဒယ်အကြံပြုအလေးချိန်နှင့်အလေးချိန် Removing.For ပေါင်းထည့်ခြင်း, ငါတို့ armature ပုံဆွဲ, armature အလေးချိန်, ကနဦး unbalance တန်ဖိုးနှင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ကျန်နေတဲ့ unbalance တန်ဖိုးကို & လိုအပ်သောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်လိုအပ်ပါတယ်။
DC ကနှင့် AC မော်တာအကြားနှိုင်းယှဉ် 5.What
DC ကမော်တာ, အမြန်၏အားသာချက်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ပိုကြီးစတင် torque နှင့်ပါ0င်ခြင်းနှင့် rated လည်ပတ်မြန်နှုန်းအကြား rated torque ရှိသော DC ကမော်တာ rated torque အောက်မှာအဆက်မပြတ် torque generate ဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကိုလည်း၎င်း၏အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အသွားအပြန်နှင့်ကာဗွန်ဖြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မည် ။ ဒါပေမယ့်အသွားအပြန်နှင့်ကာဗွန်ဖြီးမော်တာလည်ပတ်စဉ်အတွင်းမီးပွားနှင့်ကာဗွန်အမှုန့်ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်မော်တာအစိတ်အပိုင်းများကိုပျက်စီးစေခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာများ၏ကန့်သတ်ထားပြီးပါလိမ့်မယ်။
AC အမော်တာအဘယ်သူမျှမကာဗွန်ဖြီးနဲ့အသွားအပြန်, ခက်ခဲများနှင့်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့မလိုအပ်ထိန်းသိမ်းရန်ရှိသည်။ DC ကမော်တာနှင့်အတူအလားတူစွမ်းဆောင်ရည်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမယ့်ရှုပ်ထွေးထိန်းချုပ်နည်းပညာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ AC အမော်တာနှစ်မျိုးရှိပါသည်: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း motorand synchronous motor ကို။ တစ်ခုတည်း phaseasynchronous မော်တာနှစ်ခု phaseasynchronous မော်တာနဲ့သုံး phaseasynchronous မော်တာ: အ stator အဆင့်အရေအတွက်ကိုနှုန်းအဖြစ်မော်တာ ofasynchronous သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ သုံး phaseasynchronous မော်တာ၏ဖွဲ့စည်းပုံ, ရိုးရှင်းသောယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အောက်ပိုင်းကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
6.What brushless မော်တာ၏အလုပ်လုပ်နိယာမဖြစ်ပါသည်
DC က brushless မော်တာကဲ့သို့သောရိုးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံလွယ်ကူအဖြစ်အစားရိုးရာစက်မှုအသွားအပြန်ကိရိယာ (အသွားအပြန်နှင့်ကာဗွန်ဖြီး) ၏ကကောင်းသောမြန်နှုန်းစည်းမျဉ်းကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် DC ကမော်တာ၏အင်္ဂါရပ်များစတင်မသာလျှပ်စစ်အသွားအပြန် device ကိုချမှတ်, ဒါပေမယ့်လည်း AC အမော်တာ၏အားသာချက်ရှိပါတယ် ထိန်းသိမ်းရန်စသည်တို့ကို
DC က brushless မော်တာကောင်းမကောင်းတည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလျင်မြန်စွာ developped ။ အစဉ်အလာ, DC မော်တာ၏ armature rotatory ဖြစ်ပြီး, သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းငြိမ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့, DC brushless မော်တာဆန့်ကျင်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်, သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်း rotatory ဖြစ်ပါသည်, armature armature အကွေ့အကောက်များသော၏အသွားအပြန်အနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာနှင့်လျှပ်စစ် switch သည်ဆားကစ်များကအောင်မြင်နိုင်ပါသည်, ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့်, DC က brushless မော်တာမော်တာ, အနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာနှင့်လျှပ်စစ် switch ရဲ့ပါဝင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်မော်တာ Multi-အဆင့်ပါဝင်ပါသည် (Insight web studio ၏သုံးအဆင့်လေးအဆင့်တွင်ငါးအဆင့်။ ) armature အကွေ့အကောက်များသောနှင့် stator နှင့်တိုင်-အားလုံးတစ် certaina အချို့အရေအတွက်ကိုနှင့်အတူအမြဲတမ်းသံလိုက်ရဟတ်။ AA ကို, BB, သုံးအဆင့် stator အကွေ့အကောက်များသောများအတွက် CC ကိုရပ်တည်ချက်, NS, ကမော်တာရဲ့ armature အမြဲတမ်းသံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းသည်, PS မော်တာ aramture ၏တူညီသောရိုးတံအပေါ်ဆက်သွယ်သော armature အနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာဖြစ်ပါသည်, BG1, BG2, BG3 ၏တန်ခိုး switch ကိုပြွန်ဖြစ်ပါသည် လျှပ်စစ် switch သည်ဆားကစ်, ABC ရုပ်သံအကွေ့အကောက်များသောသုံးအဆင့်ပြီးရင်ပါဝါအရင်းအမြစ်ကိုချိတ်ဆက်အသီးသီး BG1, BG2, BG3 နှင့်အတူချိတ်ဆက်အမှတ်စဉ်ဖြစ်ကြသည်။ ယင်း၏အရေးယူနိယာမဖြစ်ပါသည်: PS ပါဝါ switch ကိုပြွန်ပေါ်မှာအခါ, လက်ရှိရှိအကွေ့အကောက်များသောသက်ဆိုင်ရာ stator မှတဆင့် သွား. , သံလိုက်စက်ကွင်းကို generate ပါလိမ့်မည်ပေါ်တွင်နဲ့ off, BG2, BG3 BG1 ကိုထိန်းချုပ်မယ့် signal ကိုပေး, အသံလိုက်စက်ကွင်းသံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းနှင့်အတူအပြန်အလှန် အမြဲတမ်းရဟတ်နှင့်အပေါ်ပါဝါ switch ကိုပြွန်ထိန်းချုပ်ဖို့ BG3 စနစ်တကျ၎င်း၏ armature တစ်ချိန်တည်းမှာလှည့်နှင့် BG1, BG2 မှ signal ကိုပေးတော်မူမည်ဒါအနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာ, မော်တာ၏တူညီသောရိုးတံအပေါ်ချိတ်ဆက်အတိုင်း, မော်တာ armature လှည့်ဖြစ်စေ torque generate နင်း mode မှာလည်ပတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက် armature အနေအထားနှင့်အတူစနစ်တကျ armaturecommutating အတွက်လက်ရှိလုပ်, နှင့် armature သံလိုက်စက်ကွင်းကိုလုပ်သကဲ့သို့၎င်း, ချွတ်, အရှင်မော်တာ armature တိုက်ကြီးလှည့်စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။
(1) အဓိကအား radial ဦးတည်ချက်တင်အတှကျအသုံးပွု radial ဝက်ဝံ ---, အမည်ခံအဆက်အသွယ်ထောင့်နှုန်း, အဲဒါကိုခွဲခြားနိုင်ပါသည်အဖြစ်က၎င်း၏အမည်ခံအဆက်အသွယ်ထောင့်,0နှင့် 45 အကြားဖြစ်ပါသည်: radial အဆက်အသွယ်ဆောင်သော --- အမည်ခံအဆက်အသွယ်ထောင့်0င်ဖြစ်ပါသည် ; နှင့် centripetal ထောင့်အဆက်အသွယ်ဝက်ဝံ - အမည်ခံအဆက်အသွယ်ထောင့်0င်များနှင့် 45 အကြားဖြစ်ပါသည်။
(2) ထိုးဝက်ဝံ --- အဓိကအား axial ဦးတည်ချက်တင်အတှကျအသုံးပွု၎င်း၏အမည်ခံအဆက်အသွယ်ထောင့် 45 နှင့် 90. အကြားဖြစ်ပါသည်ထိုအမည်ခံအဆက်အသွယ်ထောင့်နှုန်းအဖြစ်, အဲဒါကိုခွဲခြားနိုင်ပါသည်: axial အဆက်အသွယ်ဝက်ဝံ - အမည်ခံအဆက်အသွယ်ထောင့် 90 ဖြစ်၏ နှင့်ထောင့်အဆက်အသွယ်ဝက်ဝံထိုး --- အမည်ခံအဆက်အသွယ်ထောင့် 45 နှင့် 90 အကြားဖြစ်ပါသည်။
1) ။ ဘောလုံးလှိမ့ခန္ဓာကိုယ်ဘောလုံးဖြစ်ပါတယ် --- ဆောင်သော;
2) ။ roller bearing --- ယင်းကိုလှိမ့ခန္ဓာကိုယ် roller ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြိတ်စက်အမျိုးအစားနှုန်းကြောင့်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်: cylindrical roller bearing ---- ကြိတ်စက်ခန်ဓာကိုယ်က Cylinder ပုံစံ roller ဖြစ်ပါသည်, ဆလင်ဒါကြိတ်စက်၏အရှည် / အချင်းလျော့နည်းသို့မဟုတ်3နှင့်ညီမျှ၏, နှင့်ဆေးထိုးအပ်ဝက်ဝံ --- ကြိတ်စက်ခန်ဓာကိုအပ်သည်။
တတိယ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို-align သို့မဟုတ်မသည်နှင့်အညီခွဲခြား:
1) ။ self-align လုပ်ဖို့ bearing --- roller လမ်းကြောင်းနှစ်ခု roller လမ်းကြောင်းရဲ့ဝင်ရိုး၏ထောင့်ခြားနားချက်နှင့်ထောင့်လှုပ်ရှားမှုမှ canadapt မိမိကိုယ်ကို-align ဖြစ်၏
2) ။ non Self-align လုပ်ဖို့ဝက်ဝံ (တင်းကျပ်ဝက်ဝံ) --- နှစ်ခု roller လမ်းကြောင်း၏ဝင်ရိုး၏ထေထောင့်ကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။
စတုတ္ထ။ roller ကိုယ်ခန္ဓာ၏အတန်းအရေအတွက်အတိုင်းခွဲခြား:
1) ။ လူပျိုအတန်းဝက်ဝံ --- တစ်ခုတည်းအတန်း roller ခန္ဓာကိုယ်ရှိပြီး;
2) ။ နှစ်ချက်တန်းဝက်ဝံ --- roller ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုတန်းရှိပါတယ်,
3) Multi-အတန်းဝက်ဝံ --- roller ကိုယ်ခန္ဓာ၏ Multi-တန်းရှိပါတယ်,
1) ။ Separatable ဝက်ဝံ --- separatable အစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်;
2) ။ Inseparatable ဝက်ဝံ --- ကွင်းကောင်းကောင်းတပ်ဆင်ပြီးနောက်ကွဲကွာမရနိုငျဆောင်သော;
ဆဌမ။ bearing အရွယ်အစား (ပြင်အချင်း) အရခွဲခြား:
(1) ။ --- အမည်ခံ OD 26mm ထက်သေးငယ် micro ဝက်ဝံဖြစ်၏
(2) ။ အသေးစားဝက်ဝံ --- အမည်ခံ OD 28 ~ 55mm ဖြစ်၏
(3) ။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားဝက်ဝံ --- အမည်ခံ OD ~ 115mm 60 ဖြစ်၏
(4) ။ အလတ်စားနှင့်အကြီးစားဝက်ဝံ --- အမည်ခံ OD ~ 190mm 120 ဖြစ်၏
(5) ။ အကြီးစားဝက်ဝံ --- အမည်ခံ OD ~ 430mm 200 ဖြစ်၏
(6) ။ ဝက်ဝံပြင်ပမှာ --- အမည်ခံ OD 440mm ထက်ပိုကြီးဖြစ်ပါတယ်။
8.What နက်ရှိုင်းသော groove ဘောလုံးကို bearing ပါသလဲ
ထို့အပြင် Anti-ပွတ်တိုက်မှုဝက်ဝံအဖြစ်လူသိများ Ball ကိုဝက်ဝံ, applications များတဲ့အရေအတွက်ရိုးတံနှင့် axles အကြားပွတ်တိုက်အားကိုလျှော့ချဖို့အသုံးပြုအသေးစားသတ္တုသို့မဟုတ်ကြွေ spheres ကိုဖြစ်ကြသည်။ ဘောလုံးကိုဝက်ဝံမကြာခဏဝင်ရိုးအသင်းတော်များတွင်ပွတ်တိုက်အားလျှော့ချရန်ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီလှောင်အိမ်ထဲတွင်နေရာအလေးချိန်ကိုစုပ်ယူမယ့်စီးရီးအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ မဆိုပုံပျက်သောရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများကိုမမျှော်လင့်ဘဲကျရှုံးစေနိုင်ပါတယ်ကတည်းကအများစုက, Round အလွန်အတိအကျကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
ဘောလုံးကိုဝက်ဝံများ၏ concept ကိုကျောရောမအင်ပါယာမှလမ်းအပေါင်းတို့ကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အများကြီးသတင်းရင်းမြစ်ကိုပထမဦးဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူ Leonardo da Vinci ၏ဂုဏျတငျ။ ဒါဟာဖိလိပ္ပု Vaughan အမည်ရှိအနေနဲ့ဝလေရထားထုတ်လုပ်သူများနှင့်တီထွင်သူကသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံးဝင်ရိုးစည်းဝေးပွဲကိုမူပိုင်ခွင့်သို့သော်အခါ, 1791, သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ယခင်ရထား axles နောက်ဆုံးမှာပွတ်တိုက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်ဟောင်းနွမ်းသော်လည်း, ဘောလုံးကိုဝက်ဝံ၏ Vaughan ရဲ့အသုံးပြုမှု drive ကိုရိုးတံများနှင့်ဝင်ရိုးအကြားတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဖျက်သိမ်း။
drive ကိုရိုးတံမှာသူတို့ရဲ့အစောပိုင်းအသုံးပြုမှုပြီးနောက်စက်ရုံအင်ဂျင်နီယာများကုန်ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်တွင်အခြား application များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းအစိတ်အပိုင်းများသည်ဤဝက်ဝံတပ်ဆင်ထားရိုးကျော်ကအလွယ်တကူပြောင်းရွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့စိတျအပိုငျးအကြားပွတ်တိုက်အားလျှော့ချအဖြစ်မော်တော်-မောင်းနှင်စက်တွေကပိုထိရောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဝက်ဝံ၏အခြားအမျိုးအစားများနှင့်မတူဘဲဘောလုံးဝက်ဝံစက်ဒီဇိုင်းဖို့ဘက်စုံကဆက်ပြောသည်သော rotary နှင့် axial လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုလုံးအတွက်ခွင့်ပြုပါ။
အရေးယူဆောင်ရွက်မှုထဲမှာဘောလုံးကိုဝက်ဝံ၏အသုံးအများဆုံးဥပမာတစ်ခုမှာ roller စကိတ်စီးသည်။ လေးဘီးတစ် Boot တက်၏အောက်ဆုံးအပေါ်နှစ်ခု axles တွဲနေကြသည်။ ဤအဘီးတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာစစ်ဆေးခြင်းဟာရိုးဝန်းရံကြောင်းသေးငယ်တဲ့သတ္တုဘောလုံး၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖော်ပြသည်။ အဆိုပါစကိတ်ဘီးပေါ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အပြည့်အဝအလေးချိန်နေရာအဖြစ်, တစ်ဦးချင်းစီဘောလုံးကိုယာယီဝန်စုပ်ယူ။ အဆိုပါစကိတ်ရှေ့ဆက်တွန်းအဖြစ်, ထိုသူတို့ဝင်ရိုးပတ်လည်လမ်းကြောင်းထဲမှာလှိမ့်။ ဘောလုံးကိုဝက်ဝံဿုံပတ်ပတ်လည်နဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ကြောင့်, သူတို့ကိုအကြားထုတ်လုပ်ပြီးအနည်းငယ်သာပွတ်တိုက်လည်းမရှိ။ သူတို့ကစကိတ်နည်းနည်းခုခံနှင့်အတူတစ်ဖြောင့်လိုင်းထဲမှာရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
ဘောလုံးကိုဝက်ဝံထုတ်လုပ်မုန့်စိမ်း၏ဘောလုံးဖွဲ့စည်းရန်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဆင်တူသည်။ သတ္တုဝါယာကြိုးများ၏ထောက်ပံ့ရေးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဝံကဲ့သို့တူညီသောအချင်း hemisphere အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနှစ်ခုပြားနှင့်အတူတစ်စက်ထဲတွင်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုရှက်ခိုငျအမာအတူတကွယူဆောင်သောအခါ, တစ်ဦးကြမ်းသတ္တုဘောလုံးကိုဖွဲ့စည်းသည်။ အဆိုပါပြဿနာကိုတောက်ပကိုခေါ်အချို့သောအပိုဆောင်းသတ္တု shards နေဆဲရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဘောလုံးထို့နောက် Round တစ်စုံလင်သောပြည်နယ်ဖန်တီးရန်တောက်ပဖယ်ရှားပေးအခြားစက်များတွင်ချထားပါသည်။
ဤဒုတိယစက်နှစ်ခု groove ပြား, ဘောလုံးကိုဝက်ဝံလက်ခံရရှိရန်အိတ်ဖွင့်ထစ်နှင့်တသားတပါဝင်ပါသည်။ ဒီစက်မပြီးဆုံးသေးသောဘောလုံးနှင့်အတူဖြည်သကဲ့သို့, အထက် groove ပန်းကန်ဟာယိမျးမယိုအောက်ခြေပန်းကန်ကျော်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းညွန်အတွက်လိမ်ဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်မုန့်စိမ်း၏ဘောလုံးဖွဲ့စည်းရန်သူသို့မဟုတ်သူမ၏လက်အား အသုံးပြု. ထမင်းချက်ဖို့ဆင်တူသည်။ ဒီစက်ကနေတဆင့်ပထမဦးဆုံးပြေးနေသော Flash ဖယ်ရှားပေးနှင့်ဝံအရွယ်အစားမျှမျှတတယူနီဖောင်းဖြစ်လာကူညီပေးသည်။
တူညီသောစက်မှတဆင့်တစ်ဦးကစက္ကန့်ပြေးရောနှောဖို့ချောအရည်များနှင့်ပွန်းစားခြင်းကထပ်ပြောသည်။ ဘောလုံးကိုဝက်ဝံဟာပွန်းစားခြင်း၏အရေးယူမှုအားဖြင့်တစ်ဦးတိကျတဲ့အရွယ်အစားဆင်းမြေနေကြသည်။ အဆိုပါဘောလုံးအနေနဲ့လက်ခံနိုင်ဖွယ်အရွယ်အစားနှင့်တူညီနေမှုရောက်ရှိကြတဲ့အခါမှာတတိယပြေးသူတို့ကိုတစ်ဦးပွတ်တိုက်မှု-လျှော့ချထွန်းလင်းပေးမယ့်ချောအေးဂျင့်ကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့ကတခြား applications များအတွက်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုကြသည်ရှေ့တော်၌ထိုဝက်ဝံအားလုံးမစုံလင်မှုအတွက်စစ်ဆေးရန်တဦးတည်းနောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးပေးထားကြသည်
တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းအသွားအပြန်ဘားတစ်ခု armature ကွိုင်၏တဦးတည်းအဆုံးမှချိတ်ဆက်ကြေးနီတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကွိုင်နှစ်ခုအသွားအပြန်အရက်ဆိုင်, အ shaft.Electrical ချိတ်ဆက်မှုဆနျ့ကငျြဘနှစ်ဖက်တွဲနေသောအသွားအပြန်အရက်ဆိုင်ဆန့်ကျင်ကာဗွန်စုတ်တံကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းသောကြေးနီအရက်ဆိုင်တစ်ကာဗွန်ဖြီးနှင့်အတူ contatct နေကြသောအခါလျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုကိုအောင်နေချိန်တွင်ဤရိုးတံကိုလှည့်ဖို့ခွင့်ပြု ။
နှစ်ဦးကကာဗွန်စုတ်တံ, အပြုသဘောတဦးတည်းနှင့်အခြားအနုတ်လက္ခဏာ polarity ကအသုံးပြုကြသည်။ ယင်းဝင်ရိုး၏လည်ပတ်အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာကွိုင်မှပူးတွဲပါသောကြေးနီအရက်ဆိုင်တစ်ဦးချင်းစီကြေးနီ bar ကိုကာဗွန်စုတ်တံတဦးအောက်ထိုကဲ့သို့သောတဲ့အနေအထား၌ရှိကြ၏။ တစ်ဦးက positve ဖြီးလျှပ်စစ်ကာဗွန်ဖြီးမှတဆင့်ထိုသို့ underneth သောကြေးနီဘားထဲသို့အပြုသဘော power supply ကနေအသွားအပြန်နှင့်လျှပ်စစ်မီးစီးဆင်းမှုအပေါ်တစ်ဦးကြေးနီ bar ကိုချိတ်ဆက်။ တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏ချိတ်ဆက်ဝါယာကြိုးမှတဆင့်နှင့်ကွိုင်သို့ကြေးနီ bar ထဲကနေစီးဆင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါကွိုင်၏အခြားအဆုံးမှာပါဝါအရွက်လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုကိုဖြည့်စွက်သည့်အနုတ်လက္ခဏာဖြီးမှတဆင့် negatve power supply ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဝါယာကြိုးများနှင့်အခြားကြေးနီဘားနှင့်ပြန်ကတဆင့်ဖြတ်သန်းပါတယ်။
ယင်းရိုးတံလှည့်အဖြစ်ကြေးနီဘားတစ်ခုလျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုကိုတည်ထောင်နိုင်ရန်စုတ်တံ underneth ရွှေ့နှင့်ကြေးနီအရက်ဆိုင် underneth ဖြစ်ခြင်းထံမှထွက်ရွှေ့အဖြစ်လည်ပတ်ဒီလျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုကိုအားလပ်ချိန်ဆက်လက်အဖြစ်။ ယင်းဝင်ရိုးကြေးနီအရက်ဆိုင်လှည့်ဆက်လက်အဖြစ်ထပ်စုတ်တံနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ထားတဲ့လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူဆက်သွယ်လာပါတယ်။ ဤအချက်မှာဝင်ရိုးတစ်ခုသာအလှည့်၏ 1/2 revolved ထားပြီးကတည်းကယခုမူကား, ဤကြေးနီအရက်ဆိုင်ဆန့်ကျင်ဘက် polarity ကစုတ်တံကိုချိတ်ဆက်ကြပါတယ်။
အခြားသောလမ်းကြေးနီအရက်ဆိုင်တစ်ဦးက & B, နှင့်ကာဗွန် Brush POS & NEG တံဆိပ်ကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်မှာကြည့်ပါ။ init က "တစ်ဦးက" ကြေးနီဘား NEG ဖြီးဖို့ POS ဖြီးနှင့် B နဲ့ချိတ်ဆက်နေသည်။ အဆိုပါရိုး 1/4 အလှည့်ကိုဗဟိုပြုနဲ့ (B ကဘားတန်းအဖြစ်ကောင်းစွာဖြစ်ပါတယ်ကဲ့သို့) က "တစ်ဦးက" ကြေးနီဘား POS & NEG စုတ်တံ inbetween ဖြစ်သကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမလျှပ်စစ် Connect လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရိုးကြောင့်၎င်း၏ momentium ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆက်လက်နှင့်ရိုးတံ revolve ဆက်လက်နောက်ဆုံးတွင်လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ခြင်းအဖြစ် "တစ်ဦးက" ကြေးနီဘား NEG ဖြီးချဉ်းကပ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ B ကကြေးနီဘား POS ဖြီးနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, အကှေ့ကောကျစက်ကြေးနီဝါယာကြိုး, လူမီနီယံဝါယာကြိုး, ဂဟေဆက်ဝါယာကြိုးစသည်တို့ကို proceeed
ယေဘုယျအမျိုးအစားနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံအမျိုးအစား: အအကွေ့အကောက်များသောစက်ရဲ့လျှောက်လွှာနှုန်းအဖြစ်, စက်အကွေ့အကောက်များသောနှစ်ခုအမျိုးအစားရှိပါတယ်။
အထွေထွေအမျိုးအစား - ထုတ်ကုန်များအများအပြားမျိုးအကွေ့အကောက်များသောများအတွက်သင့်လျော်သော, သာလက်ဆောင်ပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
dedicated အမျိုးအစား - တဦးတည်းသီးခြားထုတ်ကုန်အကွေ့အကောက်များသောအဘို့ကိုသာအသင့်လျော်။
ဘုံဆက်ကပ်အပ်နှံအမျိုးအစား winiding စက်အောက်ပါကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏:
စတုရန်းေူပာင်းလဲရေးကို 1. အထူး - (အထူဝါယာကြိုးများနှင့်ပါးလွှာသောဝါယာကြိုး။ )
(ကြီးတွေလက်စွပ်, အလယ်တန်းလက်စွပ်နှင့်အသေးစားလက်စွပ်) - လက်စွပ်ေူပာင်းလဲရေးကို 2. အထူး
Transformer ၏ 3. အခြားအမျိုးအစားများ။
ပန်ကာမော်တာများအတွက် 1. အထူး - (tabel ပန်ကာ, မျက်နှာကျက်ပန်ကာ, box ကိုပန်ကာ);
မိုက်ခရိုကစားစရာမော်တာများအတွက် 2. အထူး - (လက်ကမ်းကြော်ငြာအမျိုးအစား, အထူးအကွေ့အကောက်များသောခေါင်းကိုအမျိုးအစား);
စီးရီးအမျိုးအစား armature ကွိုင်များအတွက် 3. အထူး;
ဒဿမကိန်းမော်တာများနှင့်ကြီးမားသောမြင်းကောင်ရေအားမော်တာများအတွက် 4. Speicial ။
အလယ်အလတ် frequency နဲ့အရောင်ကုဒ် induction များအတွက် 1. အထူး;
သေးငယ်တဲ့သံလိုက်လက်စွပ် induction ကွိုင်များအတွက် 2. အထူး;
လော်စပီကာ box ကိုအကြိမ်ရေဌာနခွဲကွိုင်များအတွက် 3. အထူး;
ချောင်းဆီမီးခွက် barretter များအတွက် 4. အထူး။
လော်စပီကာအသံဖြင့်ကွိုင်များအတွက် 1. အထူး;
လျှပ်စစ်အပူပေးပြွန်များအတွက် 2. အထူး;
ဒါဟာမြင့်မားအလိုအလျောက်စက်မော်တာ, လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ, pneumatic အစိတ်အပိုင်းများ, ဂီယာယန္တရား, sensor ကိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်အ etc..Usually ပါဝင်ပါသည်, ကအကွေ့အကောက်များအလိုအလျောက်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်း, ဝန်နှင့် workpiece ရြ။ စောင့်ရှောက်မှုအများအပြားစက်တွေယူနိုင်ပါသည်အော်ပရေတာကိုသာကုန်ကြမ်းလုံလောက်ပါတယ်သေချာအောင်နှင့် workpiece သို့မဟုတ်ကြေးနီဝိုင်ယာကြိုး timely.One အော်ပရေတာကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အားသာချက်: အော်ပရေတာမလိုအပ်လေ့ကျင့်ရေး, မြင့်မားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုတောင်မှကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး, တိုက်ကြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အားနည်းချက်: စျေး Semi-အလိုအလျောက်စက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း, စက်ပြေးအာမခံဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာရှင်လိုအပ်ပါတယ်ထိန်းသိမ်းရန်အနည်းငယ်ဒုက္ခနှင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲရန်ခက်ခဲသည်။
တဦးတည်းတစ်ခုတည်းထုတ်လုပ်မှုအမျိုးအစားအစုလိုက်အပြုံလိုက် prodution များအတွက်သင့်လျော်သော။
ဆုံးကျယ်ပြန့်တရုတ်များတွင်အသုံးပြု, သာ diffierent ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရန်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြောင်းပေးဖို့အော်တို winding.Convenient အောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး။
အားသာချက်: စျေးနှုန်းစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါသည်, အော်ပရေတာထုတ်လုပ်မှု type ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အဆင်ပြေစက်ကအောင်မြင်မရနိုငျသောအချို့သောနည်းပညာဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။
အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ထုတ်လုပ်မှု, အသစ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်အနိမ့်အထွက်နှင့်အတူ produsts အတော်ကြာအမျိုးအစားများများအတွက်သင့်လျော်သော။
အဆိုပါအကွေ့အကောက်များသော mode ကိုအဆိုအရထဲသို့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်: စက်အကွေ့အကောက်များသောကွိုင်, လက်ကမ်းကြော်ငြာ Machine သုံးရှုထောင်အကွေ့အကောက်များသောစက်အကွေ့အကောက်များသောရိုက်ထည့်ပါ။
ဗိုင်းလိပ်တံ Rotate, surface.Usually Transformer, inductors နှင့်ကွိုင်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြု te workpiece ပေါ်တွင်ဝါယာကြိုးခင်းကျင်းလုပ်သုံးခုကိုရှုထောင်အာကာသရွေ့လျားခြင်းနှင့် positioning ကိုအတူ coordinate ။
လက်ကမ်းကြော်ငြာ mahcine အကွေ့အကောက်များသောရိုက်ထည့်:
armture အကွေ့အကောက်များသောအတှကျအသုံးပွု winding.Usually ဖို့လက်ကမ်းကြော်ငြာမောင်းထုတ်ရန်မော်တာချမှတ်။
speicial products.Usually အထူးအကွေ့အကောက်များသော mode ကိုများအတွက်သင့်လျော်သော stator နှင့်အထူးထုတ်ကုန်အကွေ့အကောက်များသောအဘို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
12.What induction motor ကိုရသနည်း
induction motor ကိုအဖြစ်လူသိများသောအရှိဆုံးပလီကေးရှင်းအသုံးအများဆုံးလျှပ်စစ် motorused တစ်ခုမှာ။ က synchronous မြန်နှုန်းထက်လျော့နည်းနေတဲ့မြန်နှုန်းမှာအလုပ်လုပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမော်တာလည်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာအဖြစ်ဟုခေါ်သည်။ ဤသည်၌, ငါတို့ synchronous မြန်နှုန်းသောအရာကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ synchronous မြန်နှုန်းသံလိုက် fieldin တစ် rotary စက်လည်ပတ်၏အမြန်နှုန်းနှင့်စက်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အရေအတွက်ကိုထမ်းဘိုးတို့ကိုအပျေါ၌မူတည်ပါသည်။ တစ်ဦး induction motor ကိုအမြဲတမ်း stator အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အလှည့်သံလိုက်စက်ကွင်းဟာရဟတ်လှည့်စေမည်ဖြစ်သောရဟတ်အတွက် flux generate ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ synchronous မြန်နှုန်းထက်လျော့နည်းနေတဲ့မြန်နှုန်းမှာအလုပ်လုပ်ပြီး, ဒါပေမယ့်ကြောင့်အတူရဟတ်အတွက် flux လျှပ်စစ်လက်ရှိ၏နောက်ကျဖို့ အဆိုပါ stator အတွက်လျှပ်စစ်လက်ရှိ flux, အရဟတ်အဆိုပါ synchronous မြန်နှုန်းဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏ rotatingmagnetic လယ်ကိုမြန်နှုန်းမှရောက်ရှိဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုတည်းအဆင့် induction motor ကိုသုံးယောက်အဆင့် induction motor ကို - ထို input ကိုပေးဝေရေးအပျေါမှာမူတည်ကြောင်း induction motor ကိုနှစ်မျိုးအခြေခံအားဖြင့်ရှိပါတယ်။ လူပျိုအဆင့် induction motor ကိုတစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစတင်မော်တာနဲ့သုံးအဆင့် induction motor ကိုတစ်ဦး Self-စတင်မော်တာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အခုတော့ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့ကိုလှည့်မယ့်စက်ကိုဖြစ်စေနှစ်ဆစိတ်လှုပ်ရှားဆိုလိုသည်မှာနှစ်ခုထောက်ပံ့ရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦး DC ကမော်တာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ဖြီးအစီအစဉ်ကနေတဆင့်ရဟတ်ဖို့ stator နှင့်တယောက်ကိုတယောက်ထောက်ပံ့ရေးကိုငါပေးမည်။
13.What induction motor ၏အလုပ်အဖွဲ့နိယာမပါသလဲ
သို့သော် induction motor ကိုငါတို့သည်တစ်ဦးတည်းသာပေးဝေပေး, ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်သိရတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ name ကိုသူ့ဟာသူ မှစ. ငါတို့သည်သော induction ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိကွောငျးကိုနားလည်နိုင်ပါသည်, အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ flux, အ stator အကွေ့အကောက်များသောဖို့ထောက်ပံ့ရေးပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခါကွိုင်အတွက်လျှပ်စစ်လက်ရှိ၏စီးဆင်းကြောင့်ကွိုင်အတွက် generate ပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့ရဟတ်အကွေ့အကောက်များသောကြောင့်ရဟတ်သူ့ဟာသူအတွက်တိုတောင်း circuit ဖြစ်လာကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ အဆိုပါ stator ထံမှ flux အဆိုပါရဟတ်အတွက်ကွိုင်ဖြတ်မည်နှင့်ရဟတ်ကွိုင် circuit အတိုများမှာကတည်းကလျှပ်စစ်သံလိုက်သော induction ၏ Faraday ၏တရားနှင့်အညီ, လျှပ်စစ်အဆိုပါရဟတ်၏ကွိုင်အတွင်းစီးဆင်း start currentwill ။ လျှပ်စစ်လက်ရှိစီးဆင်းမည်သည့်အခါနောက်ထပ် flux အဆိုပါရဟတ်အတွက်ထုတ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့နှစ်ဦးကို flux, တဦးတည်း stator flux သည်နှင့်အခြားဖြစ်ပါတယ်ရဟတ် flux နှင့်ရဟတ် flux အဆိုပါ stator flux မှကျန်ရစ်ပါလိမ့်မည်ရှိရလိမ့်မည်။ ကြောင့်ဤသည်ရဟတ်အဆိုပါရဟတ်သံလိုက် flux လှည်၏ညှနျကွားထဲမှာလှည့်စေမည်သည့် torque ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ရဟတ်၏အမြန်နှုန်းကတော့ AC ထောက်ပံ့ရေးနှင့်မြန်နှုန်းပေါ် မူတည်. မည် input ကိုထောက်ပံ့ရေးအမျိုးမျိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ဖြစ်စေအမျိုးအစားတစ်ခု induction motor ကိုပြုပြင်နိယာမဖြစ်ပါသည်။
14.Why သုံးအဆင့် induction motor ကိုယ်ပိုင်ဖွ?
သုံးအဆင့်စနစ်, 120 °အဆင့်ခြားနားချက်နှင့်အတူသုံးတစ်ခုတည်းအဆင့်လိုင်းရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့လှည့်သံလိုက်စက်ကွင်းဟာရဟတ်ရွှေ့ဖို့စေမည်ဖြစ်သောတူအဆင့်ကွာခြားချက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဆင့်သုံးဆင့်တစ်ဦး, ခနှင့်က c ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက, အဆင့်တစ်ဂုဏျသတ်တိမြားဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, ရဟတ်လာမည့်ယခုအချိန်တွင်အဆင့်ခ၌, အဆင့်တစ်အကွေ့အကောက်များသောဆီသို့ဦးတည်ရွှေ့မည်သံလိုက်ရလိမ့်မယ်နဲ့ကရဟတ်ဆွဲဆောင်အဆင့် c ကိုထက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ရဟတ်လှည့်မှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
15.Why လူပျိုအဆင့် induction motor ကိုယ်ပိုင်မစတင်ပါသနည်း
အဲဒီမတိုင်ခင်ကျနော်တို့တစ်ခုတည်းအဆင့် induction motor ကိုတစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစတင်မော်တာနှင့်မည်သို့ပြဿနာကိုကျော်လွှားဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲသိရန်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ ac ထောက်ပံ့ရေးတစ် sinusoidal လှိုင်းကြောင်းကိုငါသိ၏ကအကွေ့အကောက်များသောတစ်ပုံစံတည်းဖြန့်ဝေ stator အတွက် pulsating သံလိုက်စက်ကွင်းထုတ်လုပ်သည်။ pulsatingmagnetic လယ်ကွင်းနှစ်ခုအတိုက်အခံလှည့်သံလိုက်စက်ကွင်းအဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ်ကတည်းကအဲဒီမှာစတင်မှာထုတ်လုပ်မျှထွက်ပေါ်လာတဲ့ torque မည်ဖြစ်ပြီးကြောင့်ဒီရန်မော်တာကို run မထားဘူး။ အဆိုပါရဟတ်ပြင်ပအင်အားစုအားဖြင့်လည်းကောင်းဦးတည်လှည့်စေလျှင်ထိုထောက်ပံ့ရေးပေးခြင်းပြီးနောက်, ထို့နောက်မော်တာကို run ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤပြဿနာကိုတဦးတည်းအကွေ့အကောက်များသောနှင့်အခြားသည့်အရန်အကွေ့အကောက်များသောနှင့်အတူစီးရီးအတွက်အကွေ့အကောက်များသောနှင့်တစ်ဦးက Capacitor fixed ဖြစ်ပါတယ်အရန်ဖြစ်ပါသည်အဓိကဖြစ်ပါသည်, ထို stator အကွေ့အကောက်များသောနှစ်ခုသို့အကွေ့အကောက်များသောအောင်နေဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ လက်ရှိအဆိုပါနှစ်ဦးစလုံးကွိုင်မှတဆင့်စီးဆင်းမည်သည့်အခါဒါကအဆင့်ခြားနားချက်စေမည်။ အဆင့်ကွာခြားချက်ရှိလိမ့်မည်သောအခါ, ရဟတ်တစ်ခုစတင် torque generate ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုလှည့်ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ လက်တွေ့ကျနော်တို့က capacitor ယင်းမော်တာကနေအဆက်ပြတ်နေသည်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လက်နှင့်လှည့်လျှင်လှည့်မှစတင်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါပန်ကာလှည့်တော်မမူကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခုတည်းအဆင့် induction motor ကိုအတွက် capacitor ကို အသုံးပြု. ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမော်တာကျယ်ပြန့်လျှောက်လွှာရှိသည်ဖို့ကို induction motor ကိုအများအပြားအားသာချက်များရှိပါသည်။ ဒါဟာ 97% မှကောင်းသောထိရောက်မှုတက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မော်တာ၏အမြန်နှုန်းဒီမော်တာအနေနဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်သည့်မော်တာအားဝန်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။ induction motor ကို၏လည်ပတ်၏ညှနျကွားအလွယ်တကူ RYB ရှေ့ဆက်ဦးတည်ချက်၌တည်ရှိ၏ဆိုလိုသည်မှာလျှင်, RBY ယင်းမော်တာပြောင်းပြန်ဦးတည်လှည့်စေမည်, သုံးအဆင့်ထောက်ပံ့ရေး၏ sequence ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသုံးအဆင့်မော်တာ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောအဆင့်မော်တာအတွက်ဦးတည်သည့်အကွေ့အကောက်များအတွက် thecapacitor ဆိပ်ကမ်းနောက်ပြန်ဆုတ်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းပြန်နိုင်ပါသည်။
တစ်ခုတည်းသောအဆင့်စနစ်ကပိုပြီးချွေတာခြင်းနှင့်အိမ်များအများစုအတွက်ပါဝါလိုအပ်ချက်ဖြစ်သကဲ့သို့နေအိမ်များအတွက်လျှပ်စစ်နှင့်အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်များအဘို့, ရုံးတွေ, စျေးဆိုင်, အသေးစားစက်ရုံများတစ်ခုတည်းအဆင့် system ကိုကျယ်ပြန့်သုံးအဆင့် system ကိုနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်, စျေးဆိုင်, ရုံးခန်းအသေးစားဖြစ်ကြောင်း, အရာအလွယ်တကူတစ်ခုတည်းအဆင့်စနစ်ဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတစ်ခုတည်းအဆင့်မော်တာ, ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ကုန်ကျစရိတ်အတွက်စျေးပေါ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းလွယ်ကူပါတယ်။ ဤအရာအလုံးစုံအားသာချက်များကြောင့်တစ်ခုတည်းအဆင့်မော်တာစသည်တို့ကိုလေဟာနယ်သန့်စင်, ပရိသတ်တွေ, အဝတ်လျှော်စက်, centrifugal စုပ်စက်, မှုတ်တံ, အဝတ်လျှော်စက်, အသေးစားကစားစရာအတွက်၎င်း၏လျှောက်လွှာကိုတွေ့
အဆိုပါတစ်ခုတည်းအဆင့် ac မော်တာနောက်ထပ်အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်:
1.Single အဆင့်သော induction မော်တာသို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာ။
2.Single အဆင့် synchronous မော်တာ။
17.What သုံးအဆင့် induction motor ကို၏အမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်
က synchronous မြန်နှုန်းနဲ့ကွဲပြားခြားနားသောမြန်နှုန်းမှာပြေးအဖြစ် induction motor လည်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာဟုခေါ်သည်။ အခြားမည်သည့်လျှပ်စစ်မော်တာကဲ့သို့ပင် induction motor ကိုနှစ်ခုအဓိကအစိတ်အပိုင်းများအမည်ရရဟတ်နှင့် stator ရှိသည်။
အဆိုပါရဟတ် induction motor ကိုတစ်လှည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရဟတ်ကတော့ရိုးတံကနေတဆင့်စက်မှုဝန်နဲ့ချိတ်ဆက်နေသည်။ သုံးယောက်အဆင့် induction motor ကို၏ရဟတ်နောက်ထပ် as- ခွဲခြားထားပါသည်
ရဟတ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. သုံးမျိုးအဆင့် induction motor ကိုအသုံးပြုသော as- ခွဲခြားထားပါသည်
Squirrel လှောင်အိမ် induction motor ကို
စလစ်လက်စွပ် induction motor ကိုသို့မဟုတ်အနာ induction motor ကိုသို့မဟုတ်အဆင့်ဒဏ်ရာ induction motor ကို
၎င်း၏အမည်ကိုအဖြစ် stator induction motor ကိုတစ်စာရေးကိရိယာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဖော်ပြသည်။ တစ်ဦးကသုံးအဆင့်ထောက်ပံ့ရေး induction motor ကို၏ stator အားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။
18.What amchine အကွေ့အကောက်များသော NIDE ND- ဥပဒေ-5B2 armature ၏လုပျငနျးနိယာမဖြစ်ပါသည်
ND- ဥပဒေ-5B2 ရဟတ်အကွေ့အကောက်များသောစက်မောင်း2အကွေ့အကောက်များသောခေါင်းစီးများချမှတ်ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံကအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အဆိုပါအကွေ့အကောက်များသော servo motor ကိုအဓိကဝင်ရိုးမှအင်အားလွှဲပြောင်းထိုသူနှစ်ယောက်အကွေ့အကောက်များသော boxes တွေကိုစားပွဲအောက်၌ fixed နေကြသည်, ထိုဆလိုက်သေတ္တာများ4ကှနျ့ဖြစ်စေသောစပါး, ရှေ့နှင့်ဆလိုက် box ရဲ့နောက်ကျောရွေ့လျားမှုတို့ကအောက်ဆုံးအကွက်တွင်ဆက်စပ်နေကြသည်ကို2ဆလင်ဒါတို့ကမောင်းနှင်နေသည် ။ လျင်မြန်စွာများအတွက်အသေးစားခရီးသွားမှိုကိုပြောင်းလဲနေစဉ်ကြီးတွေခရီးသွားမှိုနီးစပ်အဘို့ဖြစ်၏။
19.What NIDE လက်စွဲစာအုပ်အကွေ့အကောက်များသောစက်များ၏လုပ်ငန်းခွင်နိယာမဖြစ်ပါသည်
1.This အကွေ့အကောက်များသောစက်နှစ်ဆ Flyer ဖွဲ့စည်းပုံမှာ adapts, 1set 1KW servo motor ကိုနှစ်ခု Flyer လည်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း, 400W indexing servo motor ကို။ အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းယင်း armature နှစ်ခု nos လက်ဆောင်အကွေ့အကောက်များသောနှင့် device ကို clamping နေဖြင့်တင်းကျပ်စွာရောက်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ Flyer အပြေးသောအခါ, ဝါယာကြိုး wire ကိုကိုင်ဆောင်သူတဆင့်သွား, တင်းမာမှု device ကိုပြီးရင်ဆွန်းဗိုင်းလိပ်တံထဲသို့ဘီးလျှောဝါယာကြိုးမှထွက်ကြွလာ, ထို့နောက်ဝါယာကြိုးလက်ကမ်းကြော်ငြာဝါယာကြိုးလမ်းညွှန်ဘီးမှတဆင့် armature slot ကသို့ slides ။ ဒီခြေလှမ်းပြီးနောက်, အကွေ့အကောက်များသောလုပ်ဖို့ကဒ်အထိုင်သို့ armature ထားတော်မူ၏။
2.This စက်အကွေ့အကောက်များသောလုပ်ဖို့ servo system ကို adapts ။ ဤအတောအတွင်းစက်အရေးယူစစ်မှန်တဲ့အရောင်လူ့-စက် PLC controller ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်, armature indexing မော်တာနင်းကြီးတွေတန်ခိုးတော်အားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်, servo မြန်နှုန်းနှစ်ဆ Flyer လည်ပတ်မြန်နှုန်းကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ကမူ Max စတင်သောအခါအထို့အပြင်ဤစက်ထိုကဲ့သို့သောနှေးကွေးတိုးမြန်နှုန်းကဲ့သို့သောအခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာရှိပါတယ်။ မြန်နှုန်းကန့်သတ်, ဘရိတ်အချိန်, CW & CCW လည်ပတ်, ပြည့်စုံ function ကိုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြေးအတူ Pre-set ကို, etc ရေတွက်, ဒီစက်လည်ပတ်ဘို့အဆင်ပြေပါတယ်။
3.The စက်ကရိယာ pneumatic ဆလင်ဒါနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဒါဟာပိုမိုအဆင်ပြေ operating ရန်, ပန်းကန်အလုပ်လုပ်တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
4.The စက်အဘယ်သူ၏မှန်ကန်မှု 100% ဖြစ်ပါတယ် PLC စနစ်ကသွေးခုန်နှုန်းရေတွက် signal ကို, adapts
Brushless DC ကမော်တာသည်, အီလက်ထရောနစ် switching devices များရိုးရာအဆက်အသွယ်အသွားအပြန်နှင့်စုတ်တံကိုအစားထိုး, အီလက်ထရောနစ်အသွားအပြန်အောင်မြင်ရန်ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ switching devices တွေကိုသုံးပါ။ ဒါဟာတကကျယ်ပြန့်မြင့်မားတဲ့-grade ကိုမှတ်တမ်းတင်ထိုင်ခုံ, ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ, အီလက်ထရောနစ်တူရိယာနှင့်အလိုအလျောက်ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုသည်စသည်တို့ကိုမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမရှိအသွားအပြန် sparks, အနိမ့်စက်မှုဆူညံသံ၏အားသာချက်ရှိပါတယ်။
Brushless DC ကမော်တာအမြဲတမ်းသံလိုက်ရဟတ်, multipole အကွေ့အကောက်များသော stators နှင့်အနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာများထားရှိရေး။ ရာထူး sensing ကြောင့် (ထိုရဟတ်အနေအထားများအပြောင်းအလဲသည်နှင့်အညီတစုံတခုသောနိုင်ရန်အတွက် stator Wind ၏လက်ရှိပြောင်းလဲ, အကွေ့အကောက်များသောအဆိုပါ stator ဖို့ရဟတ်တိုင်ဆွေမျိုးများ၏အနေအထားတွေ့ရှိသည်နှင့်အနေအထား sensing signal ကိုပုစိတ်ပိုင်းဖြတ်အနေအထားမှာထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် , ထို signal ကိုကူးပြောင်းဆားကစ်များကလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝါ switch ကို circuit ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်, လက်ရှိ switching အကွေ့အကောက်များသောအချို့ယုတ္တိဗေဒကြားဆက်ဆံရေးအရ) ။ အကွေ့အကောက်များသောအဆိုပါ stator ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဗို့အနေအထားကိုအာရုံခံ output ကိုထိန်းချုပ်ထားအီလက်ထရွန်းနစ် switch သည်ဆားကစ်များကထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။
ရာထူးအာရုံခံကိရိယာများ, သံလိုက် photoelectric နှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်အမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးသံလိုက်အထိခိုက်မခံအနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာကို အသုံးပြု. တစ်ဦးက brushless DC ကမော်တာ (ထိုကဲ့သို့သောခန်းမဒြပ်စင်အဖြစ်တစ်ဦး magneto-အထိခိုက်မခံ diode တစ်သံလိုက်-အထိခိုက်မခံ diode တစ် magneto-resistor, ဒါမှမဟုတ်တစ်လျှောက်လွှာ-တိကျတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံဆားကစ်) ကသံလိုက်အာရုံခံဒြပ်စင်တစ်ခုပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားခဲ့ပါသည် stator စည်းဝေးပွဲကို။ သံလိုက်နှင့်ရဟတ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းအပြောင်းအလဲများကို detect ရန်။
တစ်ဦး photoelectric အနေအထားကိုအာရုံခံချမှတ်တစ်ဦးက brushless DC ကမော်တာအခြို့အနေအထားမှာ stator စည်းဝေးပွဲကိုပေါ်စီစဉ်ပေးမယ့် photoelectric အာရုံခံကိရိယာရှိပါတယ်။ အရိပ်ပန်းကန်အဆိုပါရဟတ်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားသဖြင့်, အလင်းရင်းမြစ် diode သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့အလင်းမီးသီး emitting တစ်ဦးအလင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရဟတ်, အရိပ်ပန်းကန်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်လှည့်သောအခါ, stator အပေါ် photosensitive အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဦးအခြို့သောကြိမ်နှုန်းမှာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသွေးခုန်နှုန်းအချက်ပြမှုများကို generate ပါလိမ့်မယ်။
လျှပ်စစ်သံလိုက်အနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာများနှင့်အတူ Brushless DC ကမော်တာအဆိုပါ stator စည်းဝေးပွဲကိုအပေါ် (ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုနားချင်းဆက်မှီထရန်စဖော်မာ, နီးကပ် switches များ, LC အချက်မှာဆားကစ်, ကဲ့သို့) လျှပ်စစ်သံလိုက်အာရုံခံကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ အခါအမြဲတမ်းသံလိုက်ရဟတ်အပြောင်းအလဲများကို၏အနေအထားသည်လျှပ်စစ်သံလိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုလျှပ်စစ်သံလိုက်အာရုံခံစေမည်။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း modulated signal ကိုထုတ်ပေး (၎င်း၏လွှဲခွင်ရဟတ်အနေအထားနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်) ။